Diyaarad ciidamo sida oo ka degtay Baydhabo iyo Xildhibaano ka hor yimid arrinkaasi… – Hagaag.com
Diyaarad ciidamo sida oo ka degtay Baydhabo iyo Xildhibaano ka hor yimid arrinkaasi…
Posted on 30 Nofeembar 2018 by Admin in National // 0 Comments
Diyaarad ciidamo sida ayaa goor dhow ka degtay magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay, iyadoo ciidamadan ay dirtay dowladda Federaalka Soomaaliya.
Sida ay sheegayaan wararka diyaaradan ayaa siday ku dhowaad boqol askari, oo ah ciidamada booliska ee sida gaarka ah u tababaran.
Wariyeyaal ku sugan Baydhabo ayaa sheegaya in ciidamadan Booliska la dejiyay xarumo ku dhow Madaxtooyada Baydhabo.
Wasaaradda Amniga dowladda Federaalka ayaa dhowaan war ka soo saartay xaalada amniga Baydhabo, iyadoo shaacisay inay jiraan shaqsiyaad ku howlan fal dambiyeedyo ka dhan ah xasilloonida iyo degenaanshaha.
Lama oga ujeedka rasmiga ee loo diray Ciidamadan, hase ahaatee waxaa dhowaanahan taagnaa walaac ku aadan xaalada Baydhabo oo si gaar ah dowladda Federaalka loogu eedeeyay in diyaarado sidda baabuur aan xabadaha karin iyo hub ka dejisay.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ayaa ku eedeeyay dowladda Dhexe inay faragelin ku heyso arrimaha Koonfur Galbeed, isla markaana ciidan iyo hub ka dejisay, iyadoo taageereyso musharaxiin.
Hase ahaatee waxaa jirta cabsi laga qabo in ciidamadan ay ku lug yeeshaan arrimo siyaasadeed, waxaana imaanshahooda ay ku soo aadeen xilli xasaasi ah oo la filayo in 5-ta bisha December ay dhacdo doorashada Madaxweynaha Koonfur Galbeed.